INGOSI: Amakholwa ayizimpumputhe! | isiZulu
INGOSI: Amakholwa ayizimpumputhe!
Durban - Ukuze ukwazi ukuthandaza kuNkulunkulu ongabonwayo, ngaphandle kokumbona kumbe ukumbona ngamehlo engqondo nxashane ukhuluma okanye ukhuleka kuyena kubiza ukuthi ube yimpumputhe ngokwenyama nangokomqondo.
Ubona ngingalona ikholwa yingoba angiyona impumputhe. Ngesikhathi ngisazama ukukholwa ngangiya esontweni ngicimeze uma kuthandazwa ngibike usizi lwami kuNkulunkulu kodwa inkinga engangivama ukuhlangabezana nayo ukwakha isithombe emqondweni salo Nkulunkulu engikhuluma naye.
Leso sithombe namanje ngisenaso, ngisaba-sathe ngiyasisusa asisuki. Uma ngivala amehlo ngikhuleka kuNkulunkulu ngibona umuntu wesilisa osekhulile oyimpunga esendaweni ebukeka iphakeme entanta emafini ehlezi phansi esihlalweni engilalele ngenkathi ngikhuleka.
Lesi sithombe satshalwa kimina ngenkathi ngisemncane ngifunda incwadi emabangeni aphansi eyayibizwa ngokuthi UNkulunkulu uluthando.
Lencwadi yayinemifanekiso eminingi yezidalwa zaseZulwini. Ngithe uma ngikhula ngayihlaziya lemidwebo ngaqala ukuyihlaba kodwa yayisingene-shi engqondweni.
Ukuxakwa kwami yilezi-“thombe” zezidalwa zezulu kukhulile ngenkathi nami ngikhula. Uma ngibuza iningi lamakholwa ngezawo izithombe anazo engqondweni ngenkathi ekhuleka angihlaba ngokuba yihlubuka nokungabaza uJehova.
OLUNYE UDABA: UMBONO: Izingane azigxile emfundweni, ziyeke inkolo
Umbuzo wami umsulwa, ngenkathi nikhuleka niyambona yini uJehova enikhuleka kuyena ngamehlo engqondo…unjani?
Kuze kwashaya isikhathi langinqume khona ukuyeka ukusonta ngingakayitholi incazelo ngesithombe sikaNkulunkulu okukhulekwa kuyena emabandleni ehlukene.
Lokhu kusho ngokusobala ukuthi ukuze ube yikholwa ngokugcwele kumele ube yimpumputhe ngoba lo mfanekiso owakhayo ngamehlo engqondo ngenkathi ukhuleka kungase kungabi owamukelekile okholweni.
Zinkani zababili ngilwa nokukhipha le ndoda entanta emafini eyimpunga osamlungwana esho ngohalakasha lwentshebe emhlophe ehlezi esihlalweni.
Uma kumele ngiqambe amanga ngithi angiboni lutho uma ngivala amehlo ngithandaza, ngibe ngilubona loluhenevu lwekhehla, kungamane kuyekwe-ke ukusonta nokuthandaza…ngaphetha ngokuyeka.
Disclaimer: INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.